कुनैपनि काम गर्न सजिलाे छैन-पारस खड्का (अन्तरवार्ता ) | Neplays.com
कुनैपनि काम गर्न सजिलाे छैन-पारस खड्का (अन्तरवार्ता )
By Neplays	 Last updated Nov 4, 2018
पोखरा प्रिमियर लिगको चर्चा यतिबेला स्वदेशमा मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै भइरहेको छ । पहिलो पटक पोखरामा आयोजना भइरहेको पोखरा प्रिमियर लिग खेलाडीका लागि जति महत्वपुर्ण छ त्यति नै विशेष नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान पारस खड्काका लागि छ । कारण यो प्रतियोगिता पारस खेलाडीका रुपमा मात्र होइन आयोजकका रुपमा संलग्न छन ।
पहिलो पटक कुनै फ्रेन्चाइज प्रतियोगितामा आयोजकका रुपमा समावेश भएका पारसमात्र होइन यसमा उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लपनि टिममा छन, र दुबै खेलाडी एउटा एउटा टिमको कप्तान पनि छन । तर आयोजकको टिममा आफुहरु छौ भनेर दुबै खेलाडीले अगाडी आएर बोल्न आवश्यक ठानेनन् किनकी पारसको भनाई मान्ने हो भने जसरी होस क्रिकेटको विकाश गर्नु नै हो ।
व्यवस्थापन भनेको टिमभित्र र खेल्दाखेल्दै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेका लागि व्यवस्थापनभन्दा पनि समय थियो त्यसलाई मिलाएर यो प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेका हौं ।
पीपीएलमा चितवन राइनोजको कप्तानी गरिरहेका पारस आयोजकका हिसावले के भन्छन त ?
पीपीएलको यात्रा अहिलेसम्म कस्तो भइरहेको छ ?
भेरी एक्साइटिङ । अन्तिम दुई दिन बाँकी हुँदा समूहको शीर्ष स्थानमा उक्लिन र इलिमिनेसनमा पुग्नका लागि पाँचवटा टिमको सम्भावना बाँकी छ । पोखराको यो वातावरणमा दर्शकको संलग्नता छ । एउटा खेलाडीको रुपमा यो मैदानमा आएर खेल्न पाउँदा एकदमै खुसी लागिरहेको छ ।
पारस खड्का आयोजकका रुपमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ भनिएको छ । यहाँको संलग्नता कस्तो किसिमको हो ?
छुम्बी लामा जी हुनुहुन्छ, जो क्वीन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्टको प्रवन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । उहाँसँग हामीले पहिलेदेखि नै कुरा गर्दा पोखरामा गएर एउटा राम्रो क्रिकेट प्रतियोगिता गरौं भनेर सल्लाह गर्नु भएको थियो । आखिर क्रिकेटकै लागि हो भनेर हामी सबैजना सकारात्मक भयौं । फ्रेन्चाइजी क्रिकेट अहिले लोकप्रिय पनि छ । त्यही सोचसँगै हामी सबै मिलेर ५–६ महिनादेखिको तयारीबाट अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौं । समग्रमा यो एउटा टिमको सहकार्य हो । ब्यक्तिगत रुपमा पनि सबैजना मिलेर घरेलु क्रिकेटलाई कसरी बलियो बनाउने, क्रिकेटलाई अझ कसरी ब्यवसायिक बनाउने, खेलाडीलाई ब्यवस्थित कसरी गर्ने र समग्र नेपाली क्रिकेटलाई कसरी माथि पु¥याउने सोचले अर्को पनि एउटा प्रिमियर लिग नेपालमा थपिएको छ ।
तपाईले यो प्रतियोगितामा आफुपनि आयोजक टिममा छौ भनेर नखुलाउनुको कारण ?
खुलेर आउन जरुरी छैन । क्रिकेट हो, सबै कुरा अगाडी नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । क्रिकेटले मलाई परिचय दिएको छ । र, चाहे त्यो खेलेर होस वा अन्य तरिकाले, क्रिकेटलाई सकेसम्म योगदान दिनु मेरो जिम्मेवारी पनि हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, एउटा राम्रो क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना भएको छ । त्यसमा सबैजनाको संलग्नता छ । यसलाई सफल बनाउनका लागि विषेश गरी हाम्रा प्रायोजकहरु, टिमका मालिकाहरुको भुमिका महत्वपूर्ण छ ।
एउटा टिमलाई नेतृत्व दिएर तपाई आफैं खेल्दै हुनुहुन्छ र आयोजकको रुपमा पनि हुनुहुन्छ । स्वार्थ बाजिने सम्भावना हुन्छ की हुँदैन ?
क्रिकेट म्याचको दौरान क्रिकेट खेल्ने हो । त्यसबाहेकको समयमा जे जति साधन श्रोत छ त्यसलाई उचित ब्यवस्थापनमात्र गर्ने हो । त्यसले गर्दा एउटा खेलाडीको नाताले आयोजक भन्दा पनि मेरो पहिलो प्राथकिमता टिमलाई कसरी जिताउने भन्ने हो । मैदानभित्र टिमलाई जिताउन जिउ–ज्यान लगाउने हो, मैदानबाहिर क्रिकेटको विकासमा के गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने हो ।
पीपीएलको कन्सेप्ट कसरी आयो ?
यसअघि नेपालमा फ्रेन्चाईज क्रिकेट भएको थियो । पोखरा क्रिकेट मैदान हेर्दा यो ठाउँलाई संसारभर प्रस्तुत गर्न सक्छौं भन्ने सोँच आयो । यो सोंचलाई पुरा गर्न हामीले धेरै मेहनत गर्नु परेको थियो । चार महिना अगाडी यो मैदानको परिस्थति कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ त्यसमा आकाश जमिनकै फरक छ । चार महिनामै यो मैदान यति राम्रो गराउन सकिन्छ भनी राम्रो सोंच लिएर अघि बढेका थियो र यो सम्भव भयो ।
क्यानको निलम्बन पछि सबै फेन्चाइज क्रिकेट मर्ज भएर एउटै पनि हुने सम्भावना पनि हुन्छ ?
नेपाल प्रिमियर लिग भन्ने गराउनै पर्छ । जुन क्रिकेट बोर्डले गराउँछ । आशा गरौं निलम्बन फुकुवा भएसँगै चाँडो भन्दा चाँडो काम हुने छ । यसमा हामीसँगै खेलाडी आशावादी भएका छौ ।
एक्टिभ करियरपछि व्यवस्थापनमा आउने कुरा गर्नुहुन्छ तपाई यसको सुरुआतको रुपमा पीपीएललाई लिन सकिन्छ ?
होइन, अहिले त्यो बोल्नेबेला भएको छैन । मेरो अहिलेको पहिलो ध्यान खेलाडीमै छ । जबसम्म टिमकालागि खेल्छ जबसम्म मैले टिमलाई अगाडी बढाउन सक्छु । त्यसपछि कुनै पनि रुपमा क्रिकेटमै लाग्ने हो ।
खेलाडी आयोजक हुनुुहुँदैन भनेर आलोचना पनि गर्छन ?
जसरी होस क्रिकेटको विकासमा लाग्ने हो । कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि संस्थाबाट क्रिकेटलाई सहयोग हुने गतिविधी हुन्छ भने त्यसमा सधै साथ दिनु पर्छ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता भनेको क्रिकेट प्रतियोगिता नै हो ।
आयोजक भएर प्रतियोगिता आयोजना गर्न कत्तिको गाह्रो रहिछ ?
सजिलो छैन, किनकी धेरै ठाउँमा धेरै डील गर्नुपर्ने । तर असम्भव पनि छैन् ।
पारस खड्कालाई स्पोन्सरहरुसँग कुरा गर्न त सजिलो भयो होला नी ?
जति सजिलो अरु मान्छेलाई लाग्छ त्यति सजिलो छैन् ।